Blackmagic ဒီဇိုင်းသည် Videohub Master Control Pro ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Blackmagic ဒီဇိုင်းကြေညာချက်များ Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကို
Fremont, California ပြည်နယ် - စက်တင်ဘာလ 13, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့ Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုလူအပေါင်းတို့သည် router သတင်းရင်းမြစ်နှင့်ခရီးစဉ်၏လှည့်ဖျားဖု scrolling မအဖြစ်မည်သည့် router ကို crosspoint တိုက်ရိုက်ခလုတ်ကို entry ကိုခွင့်ပြုမယ့်အသစ်ဒီဇိုင်း Router က control panel ထဲကကြေညာခဲ့သည်။ အသစ် Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုထောက်ပံ့ပေးအကြီးဆုံး 288 အပေါ်တိုင်းတစ်ခုတည်းလက်ဝါးကပ်တိုင်အမှတ်အပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်ဘို့ဆန့်ကျင်အခြားအမည်ပေးထားသောဂရပ်ဖစ်တံဆိပ်များကိုဖတ်ရှုဖို့လွယ်ကူနှင့်အတူ LCD ကို built-in တစ်ခု 288 Videohub router များ x ။ Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကို $ 695 များအတွက်ရောင်းချမည်ပါလိမ့်မယ်။
Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုပုအပေါ်သရုပ်ပြပါလိမ့်မည် Blackmagic ဒီဇိုင်း IBC 2019 တဲ 7.B45 ။
က Videohub router များပေါ်လက်ဝါးကပ်တိုင်အချက်များပြောင်းလဲနေတဲ့နှစ်ခုအဓိကနည်းလမ်းများရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုအလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဖောက်သည်ရိုးရှင်းစွာဦးတည်ရာသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်တစ်ခုခုကိုရွေးပါထို့နောက် panel ကို၏ညာဘက်အခြမ်းအပေါ်ပိုမိုကြီးမားဖုသုံးပြီး Router ထဲတွင်အားလုံးလက်ဝါးကပ်တိုင်အချက်များမှတဆင့် scroll ရန်အဘို့အ Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုသုံးစွဲဖို့အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကဖောက်သည်ပင်သည်အလွန်ကြီးမားသည် router ပေါ်တွင်လိုအပ်သော crosspoint ဖို့ scroll ရန်လွယ်ကူမယ့်ဒါ LCD ကို built-in the အသုံးပြုသူကျမ်းလိပ်အဖြစ်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှတ်တံဆိပ်များဖတ်ခြင်းနှင့်အမိန့် scroll မှကြီးမားသောလွယ်ကူသောသုံးပြီး crosspoint တံဆိပ်များ၏အက္ခရာစဉ်အပေါ်အခြေခံသည်ကိုပြသထားတယ်။
Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုလည်း built-in ခလုတ်မှတဆင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်အမှတ်တံဆိပ်များတိုက်ရိုက် entry ကိုပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားခလုတ်တစ်ခုစိတ်ကြိုက်ခလုတ်များပေါင်းစပ်အဖြစ်ဂဏန်းခလုတ်ဖြစ်ကြသည်။ ဖောက်သည်များကအလွယ်တကူထိုကဲ့သို့သော "Monitor", "အလှဆင်ခြင်း" သို့မဟုတ် "Edit ကို" စသည်တို့ကို, ပြီးတော့ router ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်အချက်များရိုးရှင်းစွာအရေအတွက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ထုံးစံ button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဝင်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်တံဆိပ်များဖို့စိတ်ကြိုက်ခလုတ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဖောက်သည်တစ်ဦး destination သည် "ု့ကပ်ရေး 3" တွင်ထည့်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်ထိုအခါသူတို့သည်သာ3button ကိုနောကျစိတ်ကြိုက်ု့ကပ်ရေးခလုတ်ကိုရွေးဖို့လိုပါတယ်။ ဤသည် Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုဖောက်သည်အလွန်ကြီးမား router များအပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏, ဒါပေမယ့်နေဆဲသုံးစွဲဖို့အလွန်မြန်ဆိုလိုသည်။
တိုက်ရိုက် entry ကိုခလုတ်လည်းလှည့်ဖျားအဖုတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါစာလိပ်စာရင်းကန့်သတ်ခွင့်ပြုပါ။ user က Monitor button ကိုတိုက်တွန်းလျှင်အထက်ပါဥပမာ, ထို့နောက်လှည့်ဖျားဖုမှမရရှိနိုင်စာရင်းကိုု့ကပ်ရေးတံဆိပ်ကပ်မည်သည့်လက်ဝါးကားတိုင်အမှတ်ကန့်သတ်ခံရလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုသူပြီးတော့အပေါ်ကဥပမာထဲမှာရှိသကဲ့သို့မော်နီတာ3ရွေးဖို့3ရိုက်ထည့်, ဒါမှမဟုတ်ပဲအပေါငျးတို့သမော်နီတာတံဆိပ်များမှတဆင့် scroll နှင့်လှည့်ဖျားအဖုကနေတဆင့်စောင့်ကြည့်3ရွေးနိုင်သည်။
Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုနေတုန်းပဲဒါကြောင့်တစ်ဦးစက်ရုံထဲမှာရှိသမျှအသုံးပြုသူတဦးတည်းကိုတပ်ဆင်ရန်တတ်နိုင်အလုံအလောက်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ်, သူတို့လူတိုင်း router ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်အချက်များပြောင်းလဲနေတဲ့ရန်လွယ်ကူလက်လှမ်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုလိုအပ် positioned နိုင်ပါသည်။
Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုအဆင့်အတန်းများနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်အချက်များ scrolling အဘို့အ machine လူမီနီယံအဖုတစ်ခုဆွဲဆောင်မှုအရောင် LCD ကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဆွဲဆောင်မှု RGB illuminated ကြည်လင်ကြည့်ခလုတ်နှင့်အတူသစ်တစ်ခု machine သတ္တုဒီဇိုင်းပါရှိပါတယ်။ ဤသည် Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေးစျေးကွက်အပေါ်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး router ကိုထိန်းချုပ်ပြားများထဲမှ Pro ကိုမှန်ကန်စေသည်။ Blackmagic ဒီဇိုင်း router သည်သဘာဝအားဖြင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာသော်လည်း, သူတို့သည်အရုပ်ဆိုးဖြစ်ဖို့ရှိသည်အဘယ်ကြောင့်မလိုပါကယုံကြည်သည်။ ကျနော်တို့အသစ်အ Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ Pro ကိုဖောက်သည်လမ်းကြောင်းများနှင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောသာယာသောအသုံးပြုသူအတှေ့အကွုံလွယ်ကူခြင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုမြင်ရပါလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှဖောက်သည်များ install လုပ်ဘို့လွယ်ကူသောဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုစံ Ethernet ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အသုံးပြုရိုးရှင်းစွာတည်ဆဲကွန်ပျူတာကွန်ယက်ကိုကိုမဆိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ မစ်ရှင်အရေးပါပတ်ဝန်းကျင်မှာများတွင်အသုံးပြုပါက, Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံ switch ကိုချိတ်ဆက်ထားနိုငျသညျ။ Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုအာဏာပေးဝေဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲ Ethernet (poe) ကျော်အာဏာကိုကနေတဆင့် powered နိုင်ပါသည်။
Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုဖန်တီးမှု post ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများသို့ fit ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့ပြီးသောကြောင့်, ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်းဆွဲဆောင်မှုကြည်လင်ကြည့်ခလုတ်ပါဝင်သည်။ ခလုတ်ကိုထုပ်ခလုတ်၏ထုံးစံတံဆိပ်ကပ်ခွင့်ပြုပါရန်အိမ်ရှေ့ကနေဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ငွေရတတ်သောသူနှင့်သန့်ရှင်းသောအရောင်များကိုတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အကွာအဝေးပြသနိုင်အောင်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး illumination အရည်အသွေး, ရှိသမျှခလုတ် RGB အယ်လ်အီးဒီနေဖြင့် illuminated နေကြသည်။ မှောင်မိုက်ခန်းများတွင်အသုံးပြုသည့်အခါ button ကို labels ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပါသည်နိုင်အောင်, ရှိသမျှခလုတ်, backlit နိုင်ပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်များ Videohub router များအဘို့အသစ်တစ်ခုကိုပိုပြီးစတိုင်ဒီဇိုင်း Router က control panel ထဲကအဘို့တောင်းလျှောက်ကြပြီ, ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အားလုံးအလွန်ပျော်ရွှင်စေလိမ့်မည်ဟုတစ်စိတ်ကူးဖြေရှင်းချက်ရှိတယ်ထင်!" Grant ကအသေးသုံးငွေ, CEO ဖြစ်သူကလည်း, Blackmagic ဒီဇိုင်း။ "ဒါဟာအံ့သြစရာကြည့်နဲ့ကျွန်မယင်း၏, သန့်ရှင်းရိုးရှင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုဒီဇိုင်းအားဖြင့်ဒါစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်, ပေါင်းကိုအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ကျနော်တို့နေရာတိုင်းသူတို့ကိုနေရာနိုင်အောင်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်အမှန်တကယ်ကြောင့် router ကိုထိန်းချုပ်စေသည်ဘယ်လောက်မြန်မြန်နားလည်ရန်ဤအလုပ်လုပ်ကြည့်ဖို့ရှိသည်။ ဒါဟာမယုံနိုင်စရာဖွင့်ကြောင့်လည်းပျော်စရာင်! "
Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုအင်္ဂါရပ်များ
110-240V ဗို့ပါဝါဆက်သွယ်မှု Ethernet ဟာစွမ်းအားဖြင့်မပေးနဲ့တွဲသုံးဘို့လည်းပါဝင်သည်။
တိုက်ရိုက် entry ကိုသို့မဟုတ်လှည့်ဖျားဖု scrolling မမှတဆင့် router များပေါ်တိုင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်အမှတ်အပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်။
လှည့်ဖျားဖုဖောက်သည်အက္ခရာစဉ်ထဲမှာ router ကိုတံဆိပ်များမှတဆင့် scroll ခွင့်ပြုပါတယ်။
တိုက်ရိုက်ခလုတ်ကို entry ကို router ကိုတံဆိပ်များအတွက်ရိုက်ခံရဖို့ခွင့်ပြု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး scrolling မစာရင်းကန့်သတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ခလုတ်အမြင့်ဆုံး illumination အရည်အသွေး RGB အယ်လ်အီးဒီနေဖြင့် illuminated နေကြသည်။
Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကိုကနေ, ဒေသခံတာဝန်နှင့်အခွန်ဖယ်ထုတ်ပြီးအမေရိကန် $ 2019 များအတွက်နိုဝင်ဘာလ 695 အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် Blackmagic ဒီဇိုင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများ။
ကုန်ပစ္စည်း Videohub မာစတာထိန်းချုပ်ရေး Pro ကို၏ဓါတ်ပုံများအဖြစ်ရှိသမျှသည်အခြားသော Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images ။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IBC2019 post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-13
ယခင်: AJA သည် IP Mini-Converter Receiver များကို New UltraHD & Reference Input Support ဖြင့်အဆင့်မြှင့်သည်
နောက်တစ်ခု: Blackmagic ဒီဇိုင်းကြေညာချက်များ Blackmagic URSA အသံလွှင့် Update ကို